Products - Shangke Kiimikada
Muujisid 1-36 natiijada 73
PQQ waa nooc cusub oo fitamiinad biyo lagu milmi karo, markii ugu horraysay waxaa loo aqoonsaday inuu yahay isku-duwaha …….
Magaca Ganglioside waxaa markii ugu horreysey u isticmaalay saynisyahan Jarmal Ernst Klenk sanadkii 1942 looguna magac daray lipids go'yaal cusub oo ka yimid unugyada burcadka maskaxda… ..
Lactoferrin (LF), oo sidoo kale loo yaqaanno lactotransferrin (LTF), waa glycoprotein si balaadhan loogu metelay dareeraha qarsoon ee kala duwan oo ay ku jiraan ……
Ergothioneine waa dabiici ku dhaca amino acid waana aasaaska loo yaqaan 'thiourea of ​​histidine', oo ka kooban atom baaruud ah …… ..
NADP cusbada budada (24292-60-2)
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP +) waa cofactor loo isticmaalo falcelinta anabolic. Nic-Nicotinamide adenine ……
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) waa cofactor caawiya dheef-shiid kiimikaadka laga helo dhammaan unugyada nool. Waxay u jirtaa laba qaab …….
NADH waa nooc nzyotinamide adenine dinucleotide (NAD) enzyme, nooc coenzyme ah oo ka shaqeeya xarunta iyo fiitamiin B3 ……….
Markaad haysatid immunoglobulin yar oo dhiigaaga ku jira waxay ku siineysaa fursad weyn oo aad ku qaadsiin karto cudurada. Lahaansha badan badan ……….
Anandamide, sidoo kale loo yaqaan N-arachidonoylethanolamine (AEA), waa aashitada neerfaha ee dufanka laga helo …… ..
Xashiishka Palmitoylethanolamide budada (544-31-0)
Kalluunka Palmasoylethanolamide (PEA) budada waa aamid dufan ah, oo ka tirsan fasalka ......
Capacity: 1287kg / bishii
Lactalbumin, oo sidoo kale loo yaqaan "protein whey", waa albumin ku jirta caano waxaana laga helay whey. Lactalbumin waxaa laga helaa… ..
Oyster peptide waxay leedahay borotiin fara badan, fiitamiin, dhexdhexaad ah microelement iyo turbine. Ka sokow, waxay ka kooban tahay tiro badan …….
NACET (N-Acetylcysteine ​​ethyl ester) waa aasaaska unugyada unugyada dhiigga ee loo yaqaan 'cysteine ​​cysteine ​​cysteine' oo leh astaamo aan caadi aheyn oo farmashiyootis ah oo cajiib ah… ..
Nikotinamide riboside (NR) waa fiitamiin hore loo yaqaan 'nicotinamide adenine dinucleotide' (NAD +) oo laga helo fitamiin hore. …….
Meclofenoxate (Centrophenoxine), oo lagu iibiyay magaca sumadda Lucidril, waa mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay uguna waxbarasho badnaa ……
β-Lactoglobulin waa borotiinka ugu weyn ee loo yaqaan 'whey protein' ee caano lo 'iyo caano lo' (~ 3 g / l), sidoo kale waxay ku yaalliin waxyaabo badan oo kale oo naas-nuujin ah …….
Oleoylethanolamide (OEA) waa soo-dhaweynta peroxisome proliferator-firfircoon-ka-shaqeysta recepor alfa (PPAR-alpha) agonist. Waa …… ..
Lactoperoxidase waa “enzyme” oo si dabiici ah looga helo caano la ogyahay inay leeyihiin guryaha lidka ku ah antioxidant ………
Lithium orotate waa cusbo ka kooban lithium (bir macdanta alkali ah) iyo orotic acid (xarun si dabiici ah looga sameeyay jirka) …….
Dihydromyricetin (ama DHM) waa soo saarid laga soo qaatay Geedka Raisin ee Jabbaan ee loo isticmaali jiray qarniyo badan sidii aalkolada ka hortagga …….
Glucoraphanin waa glucosinolate laga helay broccoli, caws, iyo iniin khardal le'eg. Glucoraphanin waxaa loo beddelaa sulforaphane …….
Sulforaphane, oo sidoo kale loo yaqaan "dl-sulforaphane", waa warshad dabiici ah oo laga helo khudaar badan oo iskutallaab ah sida …… ..
Sesamol waa xarun weyn oo laga helo miraha sisinta iyo saliida sisinta waxaana loo tixgeliyaa inay tahay qeyb weyn oo ka hortagga antioxidant ……
Astaxanthin dabiiciga ah (472-61-7) waa carotenoid dabiici ah oo laga helo dabiiciga hore ee badda ……
Saliid gabbaldayaha (Saliil abuur saliid ah) 83% (8001-21-6)
Saliidda gabbaldayaha waxaa laga soo saaraa shinnida geedka gabbaldayaha. sidaa daraadeed waxaa sidoo kale loogu yeeraa saliida gabbaldayaha, magaceeda kale waa Saliil abuur saliid ah. Saliidaheena qoraxda waa la soo saaray …….
Conjugated Linoleic Acid, ama CLA, waa eray loo isticmaalo in lagu tilmaamo isku dhafka asiidh dufan leh oo leh qaab dhismeedka guud ee ………
Beta-Arbutin waxaa laga helaa heerar sare oo dhir ka yimid qoysaska Ericaceae iyo Saxifragaceae. Dhab ahaantii, ……….
Glutathione waa xarun tripeptide ah oo ka kooban acid glutamic acid oo kuxiran silsiladeeda dhinaceeda N-terminus ……
Budada acid-poly-L-glutaMic (25513-46-6)
Aaladaha loo yaqaan 'poly-l-glutamic acid' waa dabiici dabiici ah, oo shaqooyin badan leh, iyo biopolymer biodegradable bio…
Coenzyme Q10 (CoQ10), oo sidoo kale loo yaqaan ubiquinone ama coenzyme Q, waa enzyme si dabiici ah loo soo saaray ………
Budada GM1 ayaa loo isticmaalay in lagu daaweeyo dhaawaca maskaxda ee hypoxic-ischemic, cudurka Parkinson ...
Pyrroloquinoline quinone (PQQ), oo sidoo kale loo yaqaan 'methoxatin', waa redox cofactor. Waxaa laga helaa ciidda iyo cuntada sida kiwifruit, sida …… ..
Budada MT2 (Melanotan-II) budada (121062-08-6)
Kalluunka MT2 (Melanotan-II) budada waa heptapeptide cyclic cyclic, analog of alpha-melanotropin (4,10); awood u leh .........